Warbaahinta - wararkii ugu dambeeyay. Noqo kuwa ugu horeeya ee ogow!
Warbaahinta Warbaahintu waa xarun casri ah oo casri ah oo loogu talagalay dhacdooyinka ka dhacaya Ruushka, dhulka adduunka iyo meel bannaan. Waxay leedahay dabeecad gaar ah, oo ah ballac weyn oo ah daqiiqad kasta oo kulul iyo xiiso leh
Diiwaangelinta ku-meel-gaar ah iyo joogto ah ee muwaadiniinta
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira laba nooc oo is-diiwaangalin ah muwaadiniinta Ruushka iyo muwaadiniinta ajnabiga ah ee ku sugan dhulka Ruushka - joogta ah iyo ku-meelgaar ah, meesha ay joogaan. Si kastaba ha noqotee, cid waliba ma oga
Maxaan ugu baahannahay inaan ixtiraamno caadooyinka
Qaran walbana wuxuu leeyahay dhaqankiisa iyo caadooyinkiisa, kaas oo laga soo gudbiyo jiilka ilaa qarniga. Qoys kastaa wuxuu si taxadar leh u hayaa aqoontan, waxaana laguula dhaqmaa si xushmad leh. Maqaalkani wuxuu u go'ay mawduuca.
Asalka taariikhda ee magaca
Mila waa asalka magaciisa, waalidiin badan, oo dooranaya magaca gabadooda, waxay tixgeliyaan magacyada Slavic, taas oo nasiib daro, maanta aan la daaweyn. Magacyadaas waxaa ka mid ah magaca Mila. Waxay ku fiican tahay gabadha yar ee mustaqbalka.
Nchelny City - Shabakadda wararka ee Nabarezhnye Chelny
Naberezhnye Chelny waa magaalo caan ah iyo xarun warshadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland ee Russia. Halkan noloshaada, caadooyinka, dhaqanka iyo dadka deggan (kuwaas oo ay ka badan yihiin 500 kun qof!). Daqiiqad kasta, iyo xataa hal labaad,
Live Press - bogga ugu dambeeya ee wargeysyada Kazan, Ruushka iyo aduunka
Kazan waa caasimada dalka, waa magaalo weyn oo leh tiro dad ah oo tiradoodu tahay malaayiin. Waa kuwan dhaqankooda iyo hababka, maskaxda gaarka ah, dadka deegaanka iyo martida. Daqiiqad kasta, iyo xitaa mid kasta oo labaad, wax xiiso leh, aan caadi ahayn ayaa dhaca, iyo mararka qaarkood
Ringtones - sida calaamadaha bulshada
Ma noqon doonto mid la yaab leh, laakiin marka la eego sawirrada aynu ka maqalnay casriga dadku waxay noqon karaan kuwo badan. Tani waa fariin ku socota bulshada. Maqalka codka, waxaad wax badan ka baran kartaa qof ahaan
Sidee iyo sababta ay uga takhalusi lahaayeen cabsida hadalka dadweynaha
Cabsida waxqabadka dadweynaha ee soo socota waxaa soo maray dad aad u tiro badan. Si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan dawladaan dareenka ah waxay qaadataa dabeecada wadnaha oo deggan. Intaa waxaa dheer, cabsidan ayaa la muujiyay oo keliya marka
Khilaafyada waa in aynaan samaynin bilawga xiriir cusub
Xiriir kasta oo cusub oo lala yeesho lammaanuhu waa mid xiiso leh. Haa, laakiin raadsigeena cilaaqaadka, waxaanu u muuqannaa inaan sameyno khaladaad kuwaas oo u horseedi kara horumarinta xiriirka jacaylka. Adiga oo aad u badan
5 isbaddal nololeed si loo helo ninka saxda ah
U qaado eyga - waxay noqon kartaa tallaabada ugu horreysa. Ma daalan tahay inaad raadiso qofka saxda ah? Ma waxaad ka guureysaa caajisnimada mid ka mid ah khiyaameeya, ka dibna ka baxsan? Waa wakhti aad uga baxdo wareegan.
Dhalinyarada iyo Niyadjabka: Sababaha, Calaamadaha, Hababka Ka Hortagga
Dhallinyaradu waxay leeyihiin kor u kaca iyo hoos u dhaca marka loo eego da 'kasta oo kale. Dhamaanteen waxaynu la kulannaa dhibaatooyin, laakiin waxaa jira faraqyo badan oo u dhexeeya murugada iyo dareenka niyad-jabka. Ha i sharaxo astaamaha calaamadaha
Sidee looga guulaysan karaa xishood iyo xishood?
Waxaad badanaaba maqli kartaa qof odhanaya: "Wuxuu ahaa xishood, sida dugsi dugsi." Xaqiiqdii, xishmeyn iyo xishood la'aan - maaha kaliya tayada ilmaha. Waa saaxiibka dadka waaweyn iyo, in ka badan
Miyuu khamri cabbaa? Sida loo caawiyo lamaanaha
Maxaad maskaxda ku haysaa markaad maqasho ereyga "khamriga"? Dabcan, dad badan ayaa iska ilaaliya qaylo-dhaan gaar ah, taas oo marka ugu horeysa ee muuqata ay u muuqato in ay naga xigto. Ha ilaawin wax kasta oo aad ka fikirto khamriga. Waa
Guurkaada ma noolaan doono haddii aad sii wadato xididdo isku mid ah.
Waxaa jira calaamado muujinaya in xiriirka ama guurka u dhexeeya laba qof la jabiyo. Aynu aragnay waxa ay yihiin ... # Xagee u dhow yahay haa, xaqiiqadu waa - dadku waxay ku noolaan karaan iyagoo aan galmo lahayn. Laakiin
Maxaa qofku u baahan yahay inuu sameeyo si uu si dhab ah u horumariyo
Dhawaan, weedhka "qof ayaa si dhab ah u kobcaya" dadku ma fahmaan macnaha dhabta ah. Horumarinta waxaa badanaa la fahamsan yahay in wax cusub oo cusub uu dhacayo. Sidaa darteed, tusaale ahaan, geedka ayaa ka baxa abuur caadi ah.
Sababaha 6 sababta gabdhuhu ujoogsan yihiin
Xaaladaha badankood, waxay soo noqotaa in dhibaatadu ku jirto. Ka fikir sababaha suurtogalka ah. Waxay u maleynayaan in gabowga Ha la yaabin in weli jirin nin. Waa xaqiiqo la xaqiijiyay in fekerka iyo ujeedooyinka noocaas ah
Sidee loo noqonayaa macalinka xanaanada?
Dad tiro yar ayaa qiyaasaya sida ay ugu adag tahay inay ka shaqeeyaan beerta carruurta leh. Caruurtu waxay aadaan macalin wanaagsan oo aan caqli lahayn, iyada oo ay kuula macmacaan macmacaantooda. Sidaas darteed waxaad ubaahantahay inaad karti u yeelato ama aad ogaatid inaad diyaarisid
Dagaal joogta ah oo qoyska ka yimaada ayaa farxad leh
Badanaa waxaa jira xaalado u dhaxeeya labada isqaba marka ay fikradoodu ka soo horjeedaan. Laakiin maxaa dhacaya haddii xaaladahan oo kale ay ka hadlaan fikrado kala duwan inta badan u noqdaan dood murugsan? Markaas waxay qaadan doontaa waqti badan iyo
Sidee looga takhalusi karaa isku kalsoonida?
Fikirka "Anigu waan nasiib badnaa", "Anigu ma ihi istaahil ninkan", "Anigu kama qanacsanayn mawqifkan" waxaa lagu soo booqday 70% dadka hibo iyo guuleystay. Inkasta oo dhacdadani ay tahay mid baahsan, waa laga takhalusi karaa
Sidee loo dhameeyaa dagaalku ma uusan keenin xiriirka lumay?
Qoysaska dhexdooda, dadku waxay inta badan isku khilaafaan. Sababta oo dhan waxay noqon kartaa mid kasta. Maxaa ka danbeeya tan, maxay tahay sababta? Dhibaatooyinka qaarkood waxay xoojiyaan xiriirka, halka kuwa kalena ay burburiyaan. Ku